पुष्पराज अधिकारी: विवाह अघिको यौन
यौनका विषयमा प्रोढावस्थाका मानिसहरु भने गर्छन यि केटीहरु असाध्यै विग्रिए । अझ मोवाइलले त खत्तमै पा¥यो । त्यसमाथी गाउँ गाउँमा गाडी गुडने भएपछि त ... । उनीहरु त्यसै तातेर वाक्यनै पुरा नगरी भित्र भित्रै दन्किरहन्थे । वरु अचेत त गाउँका केटी भन्दा शहरका चोखा । थप टिप्पणी हुन्थ्यो उनीहरुको । विवाह अगाडिको यौनका सन्दर्भमा तिनीहरु समाजका रक्षक वनेका, अभिभावक वनेकाहरुको आफ्नो जमाना त हामीलार्य के सुनाउथे तै पनि उनीहरु–उनीहरु भएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ चुहाउथे । आफ्ना वेलामा भएका परस्त्री गमनका कथा । तीनको निष्कर्ष हुन्थ्यो हामीले त ग¥यौ ग¥यौं वल्ल थाहा भयो त्यो गलत रहेछ । हाम्रा कुरा त मान्नु पर्छ । उनीहरुको चोखो शब्दको अर्थ हुन्छ कुमारीत्व न गुमेकी केटी, शारिरीक समपर्कमा सामेत नभएकी केटी ।
हाम्रो नेपाली समाजमा हाल हिन्दु धर्म मान्नेको संख्या ८१.३ प्रतिशत छ । जुन धर्मले छोरीलाई कन्या र दान –विवाहसंग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेकोले छोरीको कुमारीत्व तोडीनुहुन्न भन्ने परम्परागत मान्यता राख्दछ । त्यस्तै वौद्ध धर्म मान्ने धमौवलम्वीहरु नौ प्रतिशत छन् । जसले यैन र केटी संगको सम्वन्धलाई नै व्यभिचारको संज्ञा दिएको छ । त्यस्तै मुस्लिम धर्मावलम्वीहरुको संख्या ४.४ प्रतिशत छ । जसलाई धार्मिक कट्टरपन्थीका रुपमा पनि मानिन्छ । यसको अर्थ उनीहरु धर्ममा निष्ठावान छन् । उनीहरु नेपालमा वुर्कालगाउने प्रचलनवाट हटदै छन् यद्यपी यौनको विषयमा उनीहरु अत्यन्त सोचनीय विषयका रुपमा लिने गर्दछन् । विवाह पश्चात यही यौन र यौनजन्य व्यावहारलाई सुहागरातको शब्दावलीले सु सज्जित र थप महत्व एवं प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा व्याख्या गरिदै आएको छ । यसरी सर्वत्र अन्ध धार्मिक संस्कारको चेत वढेको देखिन्छ ।
विवाह अघिको यौनकार्यका विषयमा पक्ष र विपक्षमा हाल ठूलै वहस चलेको छ । यसमा मानिसहरुको मत वाझीएको पाइन्छ । विवाह पश्चात त्यही विषय अनिवार्य र अपरिहार्य हुने तर विवाह अघि किन विवादास्पद हुने या भयो ? यस प्रसंगमा साँच्चै गहिरो छलफल र वहस अनिवार्य भएको छ । पुरुषप्रधान नेपाली समाजमा जातिय विभेदकोलागि तेस्र्याइएको नैतिक प्रश्न मात्र हो ? या गतल भएर नै हो ? अभिभावकहरुले यसलाई किन संवेदनसिल माने ? वैज्ञानिक तथ्य कारण भित्र यसलाई कसरी हेरिन्छ ? यसको समाधान जरुरी छ । जहाँ सम्म कुमारीत्व शारिरीक सम्पर्कवाट मात्र नष्टहुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता (त शारीरिक श्रम गर्दा पनि नष्ट हुन्छ भन्ने तर्कका आधारमा पनि ) विस्तारै कम हुदै गएको छ । कुमारीत्व महिलाका लागि मात्र हो या पुरुषको लागि पनि ? यि र यस्तै प्रश्नको घेरावन्दिमा अलमलिएको नेपाली समाज र यौनका विषयमा चाँडैनै निष्कर्ष निकालिएन भने समाज अझै पछि पर्ने पक्का पक्की छ ।